Virgin Atlantic waxay Duullimaadyada Toddobaadkiiba Labaad u bilowdaa Bahamas
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » Virgin Atlantic waxay Duullimaadyada Toddobaadkiiba Labaad u bilowdaa Bahamas
Airlines • Airport • Aviation • Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada ee Bahamas ayaa aad ugu faraxsan inay ku dhawaaqdo in Virgin Atlantic Airlines ay toddobaadkiiba laba duulimaad ka duuli doonto Gegida Diyaaradaha Heathrow ee London ilaa Nassau, Bahamas, laga bilaabo Nofeembar 20, 2021.
Waxaa jira dalab sii kordhaya oo ka dhex socdaalayaasha Boqortooyada Midowday oo raadinaya kuleyl, Bahamiyan baxsad ah.
Duulimaadyada soo socda ee Virgin Atlantic waxay bilaabanayaan Sabtida, Noofambar 20 ee sannadkan.
Tani waa waqtigii ugu fiicnaa ee la qorsheyn lahaa baxsad Bahamas qorrax leh oo diirran laga bilaabo xilliga dayrta qabow ee soo socota ee Boqortooyada Ingiriiska.
Iyada oo xannibaadaha safarka la fududeeyay adduunka oo dhan, Bahamas waxay rajeyneysaa inay sii waddo soo dhaweynta martida ee xeebteeda.
“Waxaan si aad ah ugu faraxsanahay adeegga cusub ee Virgin Atlantic oo ah adeegyo diyaarad-qaadis laba-toddobaadle ah oo ka socda Gegida Diyaaradaha Heathrow ee London,” ayuu yiri Wasiirka Dalxiiska & Duulista Hawada, Hon. Dionisio D'Aguilar.
“Waxaa jira dalab sii kordhaya oo ka dhex socdaalayaasha Boqortooyada Midowday oo raadinaya kuleyl, Bahamiyan baxsad ah. Waxaan rajeyneynaa inaan ku soo dhaweyno xeebahayaga quruxda badan si aan u aragno waxa ka dhigaya waddankeenna meel u gaar ah Kariibiyaanka oo aan ahayn midda kale. ”
Socotada duullimaadyada soo socda ee Virgin Atlantic - oo bilaabanaya Noofambar 20 - waxay filan karaan sida ugu wanaagsan waxa Bahamas ay tahay inay bixiso. Intii ay jasiiradda ku jireen, warwareegayaashu waxay heli doonaan nasasho ugu dambaysa iyo xiisaha xiisaha leh iyada oo loo marayo dhaqanka hodanka ah ee meesha loo socdo, cuntada miiska-miiska ee xumaatay iyo yaababka dabiiciga ah ee quruxda badan. Laga soo bilaabo ciidaha qarsoodiga ah iyo xeebaha ciidda cas-cas-ka-fog, ilaa daloolka daloolka buluugga ah ee qoto dheer iyo dabaasha doofaarka, waxaa jira runtii wax qof walba ku raaxaysan karo. Ma aha in la xuso, Downtown Nassau waxay bixisaa 20 qaybood oo laba jibbaaran oo ah taallooyin, muraayado, iyo matxafyo kuwa raadinaya inay naftooda geliyaan Bahamas taariikhda qarniyadii hore. Duulimaadyadu waxay sii socon doonaan iibka Ogosto 11, 2021, iyadoo duulimaadyada dhaqaalaha ee soo laabanaya ay ka bilaaban doonaan $ 990.
Kuwa raadinaya inay ballansadaan fasaxooda xiga, ha ahaadaan Nassau ama jasiirad ku dul boodaysa dhammaan Jasiiradaha Dibadda, ayaa aadi kara www.bahamas.com/deals-packages ama ka hubso wakiillada hoteelkooda si aad wax badan uga ogaato heshiisyada iyo baakadaha la heli karo bilaha soo socda.